Sol ndiyo mari yenyika yePeru. Inzvimbo yePeruvia inopfupiswa sePEN. Maererano nehuwandu hwekushandura, dhora reAmerica rinowanzoenda kuPeru. Panguva yekuburisa uku (March 2018), $ 1 USD inokwana $ 3.25 PEN.
Nhoroondo Pfupi yeSol
Kutevera nguva yekusagadzikana kwezvemari uye hyperinflation mukati ma1980, hurumende yePeruvia yakasarudza kutora mari yerudzi rwaivepo-iyo-iyo-pasi.
Mari yekutanga yePeruvia yakaiswa mumutambo musi waOctober 1, 1991, yakateverwa neyokutanga pasi mabheji musi waNovember 13, 1991.
Iyo nyika yePeruvia inoparadzana mu céntimos (S / .1 yakaenzana ne 100 céntimos). Dhinominesheni shomanana ndeyedzimwechete yemakumi mashanu nemakumi mashanu emari, ayo maviri anoramba aripo asi asingawanzoshandiswa (kunyanya kunze kweLima), asi dhinhe guru ndiro S / .5 yesimbi.
Mari yese yePeruvia inosanganisira National Shield kune rumwe rutivi, pamwe nemashoko okuti "Banco Central de Reserva del Perú" (Central Reserve Bank of Peru). Pamusoro pacho, iwe uchaona dhinari yemari uye sarudzo yakananga kukosha kwayo. Mamwe gumi nemakumi mashanu emari, semuenzaniso, zvose zviri zviviri zvinogadzira zvigadzirwa kubva kune nzvimbo yekuchera matongo ye Chan Chan, asi S / .5 yesimbi inoshandisa Nazca Lines Condor geoglyph.
Iko S / .2 uye S / .5 yemari inonzwisisika nyore nekuda kwekuvakwa kwavo kwebimetallic.
Zvose mbiri dzine denderedzwa yakagadzirwa nemhangura yakapoteredzwa neboka resimbi.
Mabhirikiti ePeruvia anouya mumachechi e 10, 20, 50, 100, uye 200 soles. Kazhinji ATM muPeru inoparadzira S / .50 uye S / .100 mabhizinesi, asi dzimwe nguva ungagamuchira zvishoma S / .20 manotsi. Nyaya imwe neimwe ine chimiro chakakurumbira kubva munhoroondo yePeruvia kune rumwe rutivi ine nzvimbo inonyanya kuonekwa.
Munguva yekupedzisira yegore ra2011, Banco Central de Reserva del Perú yakatanga kuisa sarudzo itsva yemabhengi. Ikuremekedzwa kwePeruvia pamutsetse wega wega inoramba iri yakafanana, asi mifananidzo yakatsvaga yashanduka, sezvinenge yakagadzirwa zvachose. Zvose zvekare uye zvitsva zvinoramba zvichiri kupararira. Mashoko anonyanyozivikanwa ePeruvia anoshandiswa mazuva ano anosanganisira:
S / .10 - José Abelardo Quiñones Gonzales naMachu Picchu pamusana pekare (nhoroondo yekare inoratidza kuti Quiñones Gonzales achibhururuka nechepamusoro mu biplane yake)
S / .20 - Raúl Porras Barrenechea neche Chan Chan archaeological site panzvimbo yekare (iyo yekare chinyorwa chinosanganisira Palacio de Torre Tagle muLima)
S / .50 - Abraham Valdelomar Pintowith neChavín de Huantar nzvimbo yezvokuchera matongo panzvimbo yakatarisa (iyo yekare yekare inoratidza Laguna de Huacachina)
S / .100 - Jorge Basadre Grohmann pamwe nenzvimbo yezvokuchera matongo yeGran Pajatén pamusana pekare (chinyorwa chekare chinoratidza National Library muLima)
S / .200 - Saint Rose weLima pamwe nenzvimbo yezvokuchera matongo yeCaral-Supe pamusana pekare (chinyorwa chekare chinoratidza Gungano reSanto Domingo muLima)
Iko Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) iri bhandi rekuPeru. The Banco Central mints uye inoparadzira mapepa nesimbi mari muPeru.
Fake Money muPeru
Pamusana pehupamhi hwehupombwe, vafambi vanofanira kungwarira kugamuchira mari yakaipa muPeru (kana kupiwa vasingazivi kana sechikamu chetsvina ). Zvizivikanise nemari yese uye mabhizinesi mashoma nokukurumidza. Chengetedza kunyanya uye kutaridzika kwemari yePeruvia, pamwe chete nezvimwe zvakasiyana-siyana zvekuchengetedzwa zvinosanganiswa pane zvose zvitsva uye zvekare zvevashandisi vese.
Mari yePeru yakaodzwa
Mabhizinesi haawanzobvumi mari yakanganisa, kunyange kana mari ichiri kukodzera seyomutemo. Maererano neBBCRP, mari yakakanganiswa inogona kuchinjwa mubhengi chero ripi kana chikamu chinenge chikamu chebhengi chinoramba chiripo, kana imwe yenhamba iyo nhamba mbiri dzepamusoro dzisina kunyatsogadziriswa, kana kana chirevo chacho chiri chechokwadi (kwete chifeve).
Kana mabhizimisi edziviriro ezvokuchengetedza makuru asipo, chinyorwa chinogona kuchinjwa chete kuCasa Nacional de Moneda (National Mint) uye matare ane kodzero.
Biography yeSaint Rose weLima
Soccer muPeru: Matambi, Makwikwi, Rivalries
Nhungamiro yeCusqueña Inonyanya Kuwedzerwa Beer
The Ley Seca muPeru
Zvinodhura uye Nzira dzekudya kunze kwePeru
Pamusoro peSan Francisco Strip Clubs
Mhirizhonga yeMakomo Inotyisa 2016
Nzira Yokufamba Nayo Sezvaunogara muToronto
The LAX FlyAway Shuttle
Iris Irish Twelve Days Christmas
Vashanu eBrooklyn Shopping Malls
10 Canada Canada Vacation Ideas
Mhemberero dzeSvondo reBasa rekuNashville
I7 Best Best Walkers Strollers Yokutenga muna 2018
Painting NaDophins kuRira Las Vegas